Seheno Corduant, Author at Lemur Conservation Network - Page 2 sur 5
By Seheno Corduant on avril 7, 2020 in Bilaogy
Ny fikambanana maneran-tany momba ny fahasalamana na ny OMS (Organisation Mondiale de la Santé) dia nampahafantatra ny fisian’ny hamehana ara-pahasalamam-bahoaka maneran-tany manoloana ny fisian’ny valanaretina manerana coronavirus na COVID-19 ary fantatra ankehitriny fa misy porofo ny fisian’io tsimokaretina io COVID-19 io eto Madagasikara1. Eto am-pikarakarana ny hamehana ho an’ny fahasalamam-bahoaka isika ankehitriny, anefa tokony hahalala […]
By Seheno Corduant on mars 4, 2020 in Bilaogy
Ny tanjon’ny ExplorerHome Madagascar Hampitsiry ny fitiavana karokaroka sy ny fitiavana ny taranja STEM Hampahafantatra ny olona ny momba ny fikarohana siantifika eto Madagasikara Hanolotra hetsika fanabezana sy fialam-boly ho an’ireo mpianatra izay afaka hanampy azy ireo hahazo trai-kefa momban’ireo taranja STEM no sady miala voly. Ny tantara niantobohan’ny ExplorerHome Ireo mpiara-namorona Rehefa tonga tamin’ny […]
By Seheno Corduant on janvier 15, 2020 in Bilaogy
Fampidirana: natao hifandrindra ny biby sy ny zava-maniry Ao anatina tontolo voajanahary iray dia natao hifameno avokoa ny anjara toeran’ny zavamananaina rehetra. Ny fahambangan’iray amin’ireo dia efa miteraka fikorontanana mandalo na maharitra eo anivon’ny tontolo voajanahary iray, eny fa hatramin’ny fiainan-draolombelona mihitsy aza. Hatrany am-boalohany dia efa nisy rindra voajanahary eo amin’ny samy zavamaniry sy […]
By Seheno Corduant on novembre 28, 2019 in Bilaogy
Ny mombamomba ahy? TAHINA Roland Frédéric no anarako ary mpikambana ao amin’ny tambazotran’ny tanora misehatra ho an’ny fahamaroanaina (biobiversité) antsoina hoe Malagasy Youth Biodiversity Network aho. Teraka sy nianatra tao Morondava aho ary teny amin’ny oniversiten’Antananarivo kosa no nanohy fianarana tao aorian’ny bakalorea. Nanaraka ny lalam-pihofanana hay famokarana (agronomie) aho ary nisafidy manokana ny […]